China Palmitoyl Tripeptide-5 mveliso kunye nabenzi | JYMed
Igama Product: Palmitoyl Tripeptide-5
Ifomula Ezinto: C37H67F6N5O9
Ubunzima Ezinto: 839,959 g / Mol
Ezezicelo: isikhumba Smooth, anti-ukuguga
Palmitoyl Tripeptide-5 wenziwa ngemixokelelwane asidi acid, kwaye ukukwazi ukungena sangaphandle uze ungene nzulu dermis, apho uyayivuselela imveliso collagen kunye nokukhula ephilile. Oku kukwazi alwaneli kuzalisela collagen kudibaniso eluswini, kodwa izifundo yokuqala lubonisa ukuba le peptide kwakhona uyakwazi ukunxibelelana kunye iiseli nesikhumba ukuthintela ityhefu engena kuzo ekwenzeni ububi. Le nto yenza oku ngokuthi uwulinganise izixhobo zonxibelelwano zendalo umzimba ezisixelela iiseli into amakayenze. Olu hlobo lonxibelelwano kunceda ulusu iiseli ukuba mhlawumbi egungxula ngaphandle buthi okanye ikubeka egalelwe. karhulumente Palmitoyl Tripeptide-5 ongokwemvelo kukuba lolwelo ngokucacileyo ukuba akukho ivumba yaye amanzi ayaphela. Le peptide anokufunyanwa eziliqela iimveliso zolusu, kodwa lisetyenziswe ngokufuthi izithambiso anti-ukwaluphala ubuso serum. Palmitoyl Tripeptide-5 isetyenziswa kwinani iimveliso ezahlukeneyo anti-ukuguga ngenxa yokuba amandla ayo okukwazi ukuqhagamshelana kunye iiseli nesikhumba lukhulise imveliso collagen. isikhumba Young ngenkangeleko, Ingabinani ke akunakwenzeka ngaphandle collagen, kwaye omdala isikhumba sakho ufumana, lo collagen ngaphantsi ivelise. Iinkampani ezivelisa serum anti-ukwaluphala nezithambiso usebenzisa Palmitoyl Tripeptide-5 nje kuba ixelela iiseli solusu ukunyusa imveliso collagen ngokwendalo, nayo oku kwenza kube yimpumelelo kakhulu, nezinye iimveliso eziqulathe collagen ibe obukhulu kakhulu ukuba angene kakuhle esikhumbeni . Ngenxa Palmitoyl Tripeptide-5 isebenza ukusuka ngaphakathi ngaphandle ukwandisa imveliso collagen, usenokubona ngokukhawuleza iziphumo ngcono kunokuba obuya kwenza ngalo xa wasebenzisa cream okanye serum esiqulethe collagen ukusuka kwezihlunu isilwanyana. Nangona izifundo ngokuphathelele Palmitoyl Tripeptide-5 kusekho kumabakala okuqala, kukho ezimbalwa iingxelo naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga ezimandundu ngale peptide. Nakuba kunjalo, ukuba ngaba une ulusu ezibuthathaka, uya kusabela njani yimveliso anti-nokuguga equlethe le peptide. Ezinye abasabela eziqhelekileyo komzimba kubangelwa kwaqapheleka ulusu, sihlabe kwindawo isicelo, krwada. Ukuba unenye yezi imiba ngelixa usebenzisa i mveliso anti-ezihlasela iqulethe Palmitoyl Tripeptide-5, kufuneka udibane wesikhumba sakho ngoko nangoko ukuqinisekisa ukuba okanye hayi peptide ibangela indlela okanye ukuba omnye imveliso kukonke kunokuba ukukhetha ngcono kuwe. "Ukunyaniseka, Innovation, Rigorousness, nokuSulungeka" na ukukhulelwa ezingisileyo kwethu ngenxa ixesha elide ukudala ngokudibeneyo kunye kubathengi ukuze kuphindaphindeko macala kunye nomvuzo gqitha Ihowuliseyili Price Cosmetic Raw Material Skin Balungisa Palmitoyl Tripeptide-5 / syn-coll / pal-kvk Powder, inkxaso wakho amandla ethu obungunaphakade! Ngokufudumeleyo abathengi wamkelekile apha ekhaya nakumazwe aphesheya kutyelela inkampani yethu. "Ukunyaniseka, Innovation, Rigorousness, nokuSulungeka" na ukukhulelwa ezingisileyo kwethu ngenxa ixesha elide ukudala ngokudibeneyo kunye kubathengi ukuze kuphindaphindeko macala kunye nomvuzo gqitha Palmitoyl Tripeptide-5, Palmitoyl Tripeptide-5 Powder, syn-coll, Wena ungasoloko ufumana imveliso kunye nezisombululo kufuneka ube nabenzi yethu! Wamkelekile ukubuza ntoni imveliso yethu nantoni siyazi kwaye ingaluncedo auto abaza kuzisebenzisa. Sikhangela phambili ukusebenza nani nemeko win-win.